Analysis Na Development Of Fray Gun Market Na Home Na Mba
Gungba egbe bụ ụdị akụrụngwa na-eji ngwa ngwa ewepu mmiri ma ọ bụ ikuku abịakọrọ dị ka ike. Enwere ike iji ya wuo spraying ma bụrụ ihe dị oke mkpa na nhazi ahụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ maka ịgba spraying nke ụgbọala, dị ka fesara ụgbọala, ịgba mmanụ ụgbọ mmiri OEM, ịgba ụgbọ okporo mmiri ịgba, wdg ọ ga - ejikwa ya mee ihe na ntanetị, spraying plastic, spraying ngwaahịa osisi, spraying ulo oru, spraying ihe onwunwe, nka Spraying na ubi ndi ozo.
A na-emepụta egbe ịgba na mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ mkpuchi. N’oge na-adịbeghị anya, site na mmepe nke ụgbọ ala ụwa na ụlọ ọrụ mkpuchi, ụlọ ọrụ ịgba egbe na-etolite, ụdị ngwaahịa na-abawanye, a na-ebuwanye mpaghara ngwa, na-egosipụta njirimara ndị na-esonụ:
North America, Europe na Asia bụ isi ahịa ndị ahịa. Iri oriri nke egbe gbagburu ebuputara n’ubi ugboala, ihe omumu, ihe mmeputa osisi na ihe ndi ulo oru. Ọnọdụ oriri nwere oke mmekọrịta na mmepe nke ahịa dị ala. Site na mmepe nke ahịa dị ala, enwere ike ịhụ na North America, Europe na Eshia bụ nnukwu ahịa ahịa nke ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ, nwere nnukwu oriri chọrọ.
Eshia bụ mpaghara kachasị enye aka. Site na mmepe nke Mgbapụta égbè ịgba na North America na Europe, Eshia ejiriwo nwayọọ nwayọọ bụrụ mpaghara ebe a na-enye ọgwụ ịgba na ụwa n'okpuru usoro mbufe nke ụlọ ọrụ. N'ime ha, China eritela uru site na mmepe akụ na ụba na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ịgba egbe. Nnukwu ndị na-emepụta ụwa ejirila nwayọọ nwayọọ guzobe ụlọ ọrụ aka ma ọ bụ nke ndị mba ọzọ na-enweta ego na China ka ha sonye na mmepụta ngwaahịa ma kwalite uto ngwa ngwa nke ọkọnọ.
Asọmpi n’etiti ụlọ ọrụ na-esiwanye ike. Enwere ụfọdụ ihe mgbochi na nka na ụzụ na ụlọ ọrụ ịgba egbe. Ka ọ dị ugbu a, isi ụdị egbe egbe n'ụwa bụ SATA German, ananiste Iwata, American finishing brands pain group, American gurik, Swiss Jinma sere, German Wagner, Japanese cucannak klọb wdg. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ya na mmepe nke ụlọ ọrụ ịgba egbe zuru ụwa ọnụ na ọganihu nke teknụzụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abanye na ụlọ ọrụ, nke na-eme ka asọmpi ahịa na-adịwanye egwu.
Ike nke ihe ohuru na-akawanye mma. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, n’ọchịchọ ahịa na mmepe nke sayensị na teknụzụ na-akwalite, ikike ikike nke ụlọ ọrụ ịgba egbe zuru ụwa ọnụ na-akawanye mma, ụdị ngwaahịa ịgba egbe na-agbasawanye oge niile, arụmọrụ na-akawanye mma mgbe niile, na ahịa ahịa. nke egbe ikuku na-efe efe, egbe egbe akpaaka, egbe mgbochi okpu gburugburu ebe obibi na ihe ndi ozo.
Ikuku ikuku bụ ihe okike dị ike nke nwere ike iguzo onwe ya dị ka nkwupụta nka nka ma ọ bụ tinye ya n'ime "igbe ngwaọrụ" dị ugbu a iji mepụta usoro dị iche iche nke ọtụtụ ụzọ.
Ka ọ dị ugbu a, na mba ndị mepere emepe emepela emepe emepe emepe ikuku na ụdị ihe nrụpụta na-eme ka ụlọ ọrụ mepee emepe bụ nnukwu ụlọ ọrụ ụwa ka ukwuu na USA na Japan. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ si mba ọzọ nwere akụrụngwa dị elu karị, ikike R & D siri ike, ọkwa ọrụ dị na ọnọdụ.
Ọ bụ ezie na ire nke ikuku ikuku wetara ọtụtụ ohere, ìgwè ọmụmụ ahụ na-atụ aro ndị mbata ọhụrụ ndị nwere naanị ego mana na-enweghị uru ọrụ aka na nkwado ala, adịghị abanye ngwa ngwa ịbanye ikuku ikuku.